Burmese taste - Iora: မယ်ဇလီရွက်သုပ်၊ ဆေးဘဲဥသုပ် နဲ့ ကျောက်ကျောဖျော်ရည်
မယ်ဇလီရွက်သုပ်၊ ဆေးဘဲဥသုပ် နဲ့ ကျောက်ကျောဖျော်ရည်
မယ်ဇလီဖူးမရှိလို့ မယ်ဇလီဖူးအစား မယ်ဇလီရွက်ကို သုတ်စားပါတယ်။ ဒါကတော့ မြန်မာပြည်မှာကတည်းကစားဘူးပါတယ်။ ကွင်းဆင်းရင် မယ်ဇလီရွက်တွေနုတဲ့အချိန်ဆုို အများကြီးခူးလာပြီး ကျောပိုးအိတ်ထဲကိုထဲ့ပြီးသယ်လာပါတယ်။ ကျောပိုးအိတ်က လည်းအလေးကြီးနော်။ ကင်မရာတို့ စာအုပ်တို့ ပါတယ် စားစရာပါတယ်။ လည်ပင်းမှာလည်း မှန်ဘီလူးကဆွဲထားရသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုတွေ့ လို့ ကတော့ ခူးပြီးသားဘဲ။ ဒါကြောင့် သုတ်စား၊ ကြော်စား၊ ဟင်းချုိုချက်စား တို့ စား အမျိုးစုံစားဘူးပါတယ်။
သုတ်တာကတော့ မဆန်းပါဘူး။ ရုိုးရာနည်းအတိုင်း ကြက်သွန်ဖြူ၊ နီကြော်၊ ပုဇွန်ခြောက်မှုန့် ၊ ပဲမှုန့် သို့ မဟုတ် မြေပဲဆံထောင်း (ကျမကမြေပဲကုို သုတ်တဲ့ထဲပါရင်မကြိုက်လို့ မထဲ့ပါဘူး)။ နှမ်းလေးလှော်ပြီးထောင်းထဲ့။ အခုတော့ပုလင်းထဲက အရွက်ဆုိုတော့ ပြုတ်စရာမလိုပါဘူး။ ရေဆေးပြီး ညှစ်ပြီး ရိတ်ရိတ်လှီးရုံပါဘဲ။ ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီးရေဆေးထဲ့။ မပါလည်းရပါတယ်။ ဆား တုို့ ငံပြာရည်တို့ သင့်ရုံထဲ့။ အချဉ်ကြိုက်ရင် သံပုရာသီးလေးညှစ်ထဲ့။ အစိမ့်ကြိုက်ရင် သံပုရာသီးမထဲ့ပါနဲ့ ။ အချုိုမှုန့် သုံးရင် နဲနဲထဲ့။ ကျမကတော့ တတ်နုိုင်ရင် ရှောင်ပါတယ်။ မတတ်နုိုင်ရင် လျှော့ ထဲ့ပါတယ်။ အလွန်အကျွန်တော့ မသုံးပါဘူး။ ဆီစိမ်း သို့ မဟုတ် ဆီကျက်ထဲ့ပြီးနယ်ပြီးရင်ပြီးပါပြီ။ ငရုတ်သီးလဲ အစိမ့်သုတ်ဆုိုမထဲ့ပါဘူး။ အချဉ်ထဲ့သုပ်မှထဲ့ပါတယ်။
ဆေးဘဲဥသုပ်ကတော့ ကျမရဲ့ သူအတွက်ပါ။ ကျမကမကြိုက်ပါဘူး။ ခရမ်းချဉ်သီး လေးပါးပါးလှီးထဲ့၊ ကြက်သွန်နီ ပါးပါးလှီးရေဆေးထဲ့၊ ကြက်သွန်ဖြူကြော်လေးထဲ့၊ (ကျမတော့ အဖြူ ကြော်ရော အနီကြော်ရောထဲ့ထားပါတယ်။) နံနံပင်ထဲ့၊ ငံပြာရည်လေးပါးပါးထဲ့ ပြီး ဆီစိမ်းလေးနဲ့ သုတ်ပေးပါတယ်။ ငရုတ်သီးစိမ်းလေးနဲနဲညှပ်ထဲ့ ပါတယ်။ မကြိုက်ရင်မထဲ့ပါနဲ့ ။ နှမ်းလေးနဲနဲထဲ့လိုက်ပါသေးတယ်။ အားလုံးသမအောင် မွမွလေးနယ်ပြီးရင် ပြီးပါပြီ။ ဒါလည်း မြန်ပါတယ်။ ဒါကမြန်ပြီးသက်သာပေမဲ့ ကျမကမကြိုက်တော့ သူ့ ကိုကျမရဲ့မြန်ကောင်းသက်သာစာရင်းထဲမထဲ့နုိုင်ပါဘူး ကြိုက်တဲ့သူများအတွက်တော့ မြန်ကောင်းသက်သာဖြစ်မှာပါ။း)
ကျောက်ကျော အမဲဘူးကို ကုိုယ့်ဘာသာလှီးပြီး ရေခဲရယ်၊ သကြားရေရယ် နဲ့ ဖျော်သောက်ပါတယ်။ သံပုရာသီးလေး ညှစ်ထဲ့ပါသေးတယ် မွှေးအောင်လို့ ပါ။ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဆူးလေ ကျောက်ကျောအတုိုင်းပါဘဲ။
အပျင်းပြေ စားသွားပါဦး ယောင်းရင်းတုို့ ရေ။ လာလည်လို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မှတ်ချက်လေးတွေပေးသွားရင်လည်း နွေးထွေးမှုကုိုခံစားရလုို့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ တန်ဘိုးလည်းထားပါတယ် အချိန်ပေးပြီးရေးသွားလို့ ။
Posted by Iora at 1:49 AM
Labels: drinks, Salad, Snacks
Mon Petit Avatar April 16, 2011 at 3:53 AM
I wanna eat all!!!!
subuueain April 16, 2011 at 7:40 AM
အကုန်လုံး စားချင်စရာလေးတွေချည်းပါဘဲလား။ ပန်းခြောက်အပင်က မှန်တယ်ထင်တာပဲ IORA ရေ။:P အိမ်ကအပင်က အဲလောက်မထွားဘူး။ တစ်ပွင့်၊နှစ်ပွင့်ဘဲ ပွင့်ပြီင်္း လှီတယ်။ စားလောက်အောင်မရပါဘူး။ တောင်ကြီးက မျိုးရလို့စိုက်ထားတာ။ အိမ်က အပူပိုင်းမှာမလို့လားမသိဘူး အပင်က လှီတယ်။
ရွှေညာသားလေး April 16, 2011 at 8:19 AM
အညာမှာ မယ်ဇလီတွေပေါပေမယ့် အရွက်ကိုတော့ မစားဖူးဘူးဗျ...ကောင်းမယ့်ပုံပဲ...တန်ဆောင်မုန်း လပြည့်ဆိုရင်တော့ အဖူးတွေကို အများကြီးခူး ပြုတ်သုပ်ပြီး တခြားအိမ်တွေကိုပါ ဝေပါတယ်။ အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တော့ အရွက်ကို သုပ်စားကြည့်အုံးမှပဲ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အိုင်အိုရာ.... ဆေးဘဲဥတော့ ကျွန်တော်လည်း မကြိုက်ဘူး။ ပျော်ရွှင်ပါစေ....
Iora April 16, 2011 at 8:37 AM
Mon Petit Avatar ..
Then pls eat all. OK :)
ကျေးဇူးပါစုဘူးအိမ်ရေ ပန်းခြောက်ပင်အကြောင်းပြောပြပေးလို့ ၇ယ်..လာဘည်လို့ ၇ယ်..
Anonymous April 16, 2011 at 10:31 AM
အပြင်က ခုမှပြန်ရောက်လို့ မောနေတာနဲ့ အတော်ပဲ :)
Iora April 16, 2011 at 12:14 PM
အရွက်နုလေးတွေကြော်စားလည်းကောင်းတယ်သိလား။ သူငယ်ချင်းတယောက်က ၀က်သားနဲ့ ကြော်စားတယ်။ ကောင်းတာဘဲ။
ရမယ်။ ခဏစောင့်။ အမောဖြေပြီးတာနဲ့ ရယ်ဒီဘဲ..း))
yar zar April 16, 2011 at 1:06 PM
အစ်မ အိုင်အိုရာ ပုံတွေကိုကြည့်ပြီး တံတွေး မျိုချသွားပါတယ်ဗျ...
မယ်ဇလီအရွက်ကို စားရမှန်းမသိဘူး... မယ်ဇလီဖူးတော့ တန်ဆောင်မုန်းလပြည့်နေ့မှာ အများကြီး သုပ်စားကြပါတယ်..
ငွေစန္ဒာ April 16, 2011 at 2:26 PM
လေးသောက်လိုက် နဲ့ အမောပြေသွားပြီ။ကျေးဇူးပဲနော်။
ma April 16, 2011 at 2:32 PM
ညီမရေ မယ်ဇလီရွက်ဗူးက asian market က၀ယ်တာလား ? အမက မယ်ဇလီဖူး ဗူးဘဲ သိတယ်။ အရွက်ဗူး မမြင်မိလို့ပုံလေးတင်ပေးပါလားဟင်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်။ အခုလာမဲ့ easter sunday ပိတ်ရက်ကျ လုပ်
စားစရာလေး ၁ခု idea ရသွားပြီ။ ကျေးဇူးနော် မယု
Baby taster April 17, 2011 at 6:53 AM
မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ နှစ်သစ်လေးဖြစ်ပါစေ
ဆေးဘဲဥဆို အသေကြိုက် မယ်ဇလီရွက်သုပ်စားရမယ်
ရှဲ့ ရှဲနီး)
ညယံ April 17, 2011 at 6:47 PM
မယ်ဇလီရွက်သုပ်၊ ဆေးဘဲဥသုပ် နဲ့ ကျောက်ကျောဖျော်ရည် အဲဒီသုံးခုလုံး မစားရတာ ကြာပြီ ။ ရှလွတ် ... :)
Nyi Linn Thit April 18, 2011 at 4:22 AM
အရွက်သုပ်ဆိုရင် အားလုံးနီးပါးကို ကြိုက်ပါတယ်၊ အခု မယ်ဇလီရွက်သုပ် လည်း ကောင်းမှာသေချာတယ်..၊ ဆေးဘဲဥတော့ တခါလားပဲ စားဖူးလို့ အရသာတောင် သိပ်မမှတ်မိချင်ဘူး....၊ နှစ်သစ်မှာလည်း အသုပ်တွေ အများကြီး ဆက်သုပ်နိုင်ပါစေဗျာ...။း)
Iora April 18, 2011 at 8:50 AM
မယ်ဇလီရွက်ပုလင်းပုံကုို http://mamaiora.blogspot.com/2011/02/blog-post_19.html မှာတင်ဘူးပါတယ်။ ကြည့်လိုက်ပါနော်။ ဟုတ်ပါတယ်။ အာရှဆိုင်က၀ယ်တာပါ။ လာလည်လို့ ကျေးဇူးပါ။ လုပ်စားမယ်ဆုိုလို့ ဝမ်းသာရပါတယ်။ ကြိုက်မှာပါ။
သုတ်စား သုတ်စား ကြိုက်မှာသေချာတယ်။ ကုိုယ်တော့ အဲဒီဘူးကို အပြတ်မခံဘူး။ မရှိတော့ဘူးမှတ်ပြီး ခဏခဏ၀ယ်လို့တခါတခါပုံနေတတ်ပြန်ရော။
မစားရတာကြာပြီဆုိုလည်း အပြတ်သာအားပေးသွားပေတော့း)
ပေးတဲ့ဆုနဲ့ ပြည့်ပါစေလို့ ပြောရင်..ကုိုယ်ချည့်သုတ်နေရမှာ..
ပြန်ပြင်ပေးရင်ကောင်းမယ်..အသုပ်တွေအများကြီး ဆက် စား နိင်ပါစေလို့ ။ ဒါမှသူများတွေသုပ်ကျွေးတာလည်းစားရအောင်။ ကုိုယ်သုတ်ကုိုယ်စားဆုို ငြီးငွေ့ စရာကြီး။း)))))))))))))))))
ကောင်းမွန်ဝင်း April 18, 2011 at 8:33 PM
အိုင်အိုရာရဲ့ လက်ရာကိုတော့ ပြောစရာမရှိပါဘူး။
မစားဘူးလည်း ဓါတ်ပုံတွေကနေ ကောင်းမယ်ဆိုတာရယ် မှန်းအရသာခံရတာနဲ့ ရှယ်ပါပဲ။
ဆူးလေကျောက်ကျောအတိုင်းပဲ ဆိုတာ သဘောကျမိတယ်။
မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာ စိတ်ရောကိုယ်ရော ချမ်းသာကျမ်းမာပါစေ။
Iora April 18, 2011 at 10:46 PM
ဟင်းဟင်းသဘောကျသွားပြီ။ ပြောစရာမရှိဘူး စားမှမစားဘူးတာဆိုတာကုို။ ပုံတွေကအရသာမပေးနုိုင်တော့ ရဲရဲကြီးကျွေးနေတာလေ..း)
တကယ်သာဆိုရင်..ပေါ့တာတို့ ငံတာတို့ စပ်တာတို့ ချဉ်သွားတာတို့ နဲ့ ကြုံချင်ကြုံနေမှာ..
PAUK May 16, 2011 at 8:29 PM
ဖီတန် (ဆေးဘဲဥ)တော့ သုတ်တာချင်းမတူဘူးနော်။
Iora May 16, 2011 at 11:02 PM
မယ်ဇလီရွက်သုတ်ကလက်ဖက်ရွက်ကို ဆီချက်တုို့နှမ်းတို့ နဲ့ သုတ်သလိုမျိုးလို့ ထင်တယ်။ သုတ်တာချင်းမတူတာဆို ကုိုယ်ကကိုယ်လုပ်ချင်တာလုပ်တာကိုးပေါက်ရေ။
သူတို့ တွေသိပ်ဂုဏ်ယူကြတဲ့ပန်း (ယခင်ပို့ စ်အဆက်)...
နေ့ ခင်းအဆာပြေ အကြော်စုံ
သီးစုံကြက်ဥချဉ်ရည်၊ ၀က်သားလုံးကြော်၊ ငြုတ်သီးဆား...
မယ်ဇလီရွက်သုပ်၊ ဆေးဘဲဥသုပ် နဲ့ ကျောက်ကျောဖျော်ရည...
တန်ခူးလရဲ့ မုန့် အလှူ အုန်းနုို့ ကျောက်ကျောနဲ့ ...
တုို့ စရာစုံ၊ ငါးပိကောင်ဆီလည်ရေလည်ချက် နဲ့ သီးစုံ...
ထမင်းလွတ်ပုဇွန်ကြော်နဲ့ တိုတိုထွာထွာ ဗက်ဂျီအကင်...
ငါးပတ်မွှေချက်၊ ၀က်နှလုံးဆီပြန်ချက်၊ ၀က်သားလုံးမဆ...